Ezra 4 Ezra 5 Ezra 6
Ary tamin'izany andro izany koa dia nankany aminy ireo Tatenay, governoran'ny ety an-dafin'ny ony ety, sy Setara-bozenay mbamin'ny namany; ka izao no nataony taminy: Iza no nandidy anareo hanao io trano io sy hahavita io mànda io?
Ary izao koa no nataonay taminy: Iza avy no anaran'izay lehilahy manao io trano io?
Ny tenin'ny taratasy izay nampitondrain'i Tatenay, governoran'ny ety an-dafin'ny ony ety, sy Setara-bozenay ary ny Afarsekita namany, izay amin'ny ety an-dafin'ny ony ety; ho any amin'i Dariosy mpanjaka;
Dia nanontany ireo loholona ireo izahay nanao hoe: Iza no nandidy anareo hanao io trano io sy hanangana io mànda io?